Dowladda Federaalka oo hub iyo ciidamo hor leh u daabushay Gobolka Gedo - Jowhar Somali news Leader
Home News Dowladda Federaalka oo hub iyo ciidamo hor leh u daabushay Gobolka Gedo
Dowladda Federaalka oo hub iyo ciidamo hor leh u daabushay Gobolka Gedo
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa xoojisay dhaq dhaqaaqyada ciidan ee ay ka wado Gobolka Gedo, iyadoo saddexdii maalmood ee la soo dhaafay ay gaareen diyaarado hub sida iyo ciidamo dheeraad ah, kuwaasoo xoojin u ah kuwii horay loo geeyay.
Warar ay heshay Jowhar.com ayaa sheegaya in hubka la geeyay Gobolka Gedo uu ahaa hubkii ugu faraha badnaa ee gaara gobolka maalmihii la soo dhaafay, iyadoo dhowr diyaaradood ay ka dageen degmada Beledxaawo iyo Doolow.
Sidoo kale ilo wareedyada ayaa sheegaya in hubka gaaray Gobolka Gedo laga bixiyay keydadka kala duwan ee Ciidanka dowladda, waxaana hubabka qaar lagu sheegay inay ku jiraan madaafiicda goobta dagaalka.
Wararka ayaa intaa ku daraya in Kaaliyaha Taliyaha NISA C/llaahi Kulane oo la sheegay inuu awood badan ku leeyahay NISA, isla markaana Madaxweynaha ugu idman yahay dhaq dhaqaaqyada dowladda ka wado Gobolka Gedo ayaa shalay gaaray degmada Beledxaawo, isaga iyo Ciidamo si aad ah u hubeysan.
Mr Kulane oo lagu tilmaamo inuu yahay gacanta midig ee Madaxweyne Farmaajo u qaabilsan howsha Gobolka Gedo ayaa dhowr jeer isaga daba-noqday gobolka, isagoo gaaray degmooyinka Doolow, Beledxaawo, Baardheere iyo Luuq, isagoo isku dubaridaya howlaha ciidanka iyo diyaar garowgooda, waxaana maalmo ka hor intii ay socdeen dadaalada lagu xalinayay xiisaddii ka taagneyd xuduuda uu kula kulmay degmada Mandhera Saraakiil ka tirsan Ciidanka Kenya.
Saacadihii u dambeeyay waxaa laga soo sheegayay degmada Beledxaawo dhaq dhaqaaqyo ciidan iyo xoojinta difaacyada ciidanka leeyihiin, waxaana arrintan ay ka dambeysay kaddib markii dowladda Federaalka ku gacan seyrtay dalabkii Mareykanka iyo xubnaha Beesha Caalamka u jeediyeen ee ahaa in Ciidamada ay geysay ka soo saarto, si xasillooni loogu soo celiyo aagga xuduudka Beledxaawo iyo Mandhera Kenya, waxaana durba markii dhaq dhaqaaqyadaas bilowday saan saan dagaal laga cabsi qabo inuu mar kale ka dhaco Beledxaawo iyo agagaarka xuduudka Kenya oo ay ku sugan yihiin Ciidamada Jubbaland ee uu hoggaaminayo C/rashiid Janan.